बिजनेस भिसामा आएका उत्तर कोरियाली नेपालमा लुकिछिपी डाक्टरी गर्दै - बिजनेस भिसामा आएका उत्तर कोरियाली नेपालमा लुकिछिपी डाक्टरी गर्दै
नेपालबहस संवाददाता २०७४,6चैत्र 27 Views
६ चैत, काठमाडौं । तनहुँको दमौली र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा उत्तर कोरियाली चिकित्सकले अवैध रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको पाइएको छ । उत्तर कोरियाली नागरिकबाटै सञ्चालित दमौलीस्थित ने कोर्यो अस्पताल र नेपाली नागरिकद्वारा सञ्चालित महेन्द्रनगरस्थित सेफर हस्पिटलमा बिजनेस भिसामा आएका उत्तर कोरियाली चिकित्सकले स्वीकृतिबिनै सर्वसाधारणको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् । बिजनेस भिसामा काम गर्नु गैरकानुनी हो । अध्यागमन नियमावली २०५१ को दफा २० उपदफा २ मा बिजनेस भिसा प्राप्त गर्ने विदेशीले जुन उद्देश्यको निमित्त भिसा लिएको हो, त्यसबाहेक अन्य काम गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
ने कोर्यो अस्पतालमा १० जना उत्तर कोरियालीले काम गर्दै आएका छन् । तीमध्ये ८ जना चिकित्सक हुन् । दुई जनाले प्रशासनिक काम गर्दै आएका छन् । उनीहरू कसैसँग पनि कामदार भिसा छैन । उनीहरू कसैले पनि मेडिकल काउन्सिल र श्रम विभागबाट समेत स्वीकृति लिएका छैनन् । सेफरमा कार्यरत डा. को पेक सानले मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति लिएका छन् तर श्रम स्वीकृति लिएका छैनन् ।
श्रम विभागका निर्देशक वरुणकुमार झाले श्रम स्वीकृतिबिना कुनै पनि विदेशी नागरिकले काम गर्न नपाउने बताए । ‘कुनै पनि उत्तर कोरियाली नागरिकले अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएका छैनन्,’ निर्देशक झाले भनेका छन्, ‘वर्क पर्मिट नलिई कुनै विदेशीले काम गर्न पाउँदैनन् । उत्तर कोरियालीले श्रम स्वीकृति लिएको हाम्रो रेकर्डमा देखिँदैन ।’
सेफर अस्पतालका लागि उत्तर कोरियालीले नभई दक्षिण कोरियाली नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएको उनले जानकारी दिए । सेफरका सञ्चालक धर्म चन्दले श्रम स्वीकृति लिएर मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएपछि मात्र उत्तर कोरियाली चिकित्सकलाई काम लगाएको दाबी गरे ।
विदेशी चिकित्सकले नेपालमा काम गर्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ तर उत्तर कोरियाली चिकित्सक सबैले अनुमति नलिएको मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ । काउन्सिलका रजिस्ट्रार दिलीप शर्माले विदेशी चिकित्सकले नेपालमा काम गर्न काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने बताए । ‘मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नभई विदेशी चिकित्सकले काम गर्नु गैरकानुनी हो’, उनले भने । कञ्चनपुरका लागि एक जना उत्तर कोरियालीले अनुमति लिएको उनले जानकारी दिए ।
‘ने कोर्यो’ को लगानीकर्ताका रूपमा बिजनेस भिसा लिएका उत्तर कोरियालीका डिपेन्डेन्टमा आएकाहरूसमेत त्यहीँ कार्यरत छन् तर डिपेन्डेन्टमा आउने कसैले पनि काम गर्न पाउँदैनन् । ‘उनीहरू वास्तविक श्रीमान्– श्रीमती हुन्÷होइनन् भन्ने नै शंकास्पद छ’, तनहुँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका एक अधिकारीले भने, हामीले अनुगमन गरेपछि नवीकरण गरेका हौं तर उक्त अस्पतालको सेवाबाट सन्तुष्ट छैनौं ।’ जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालयले पछिल्लोपटक माघ १० गते एक वर्षका लागि ने कोर्यो अस्पताललाई नवीकरण गरेको थियो । ने कोर्योमा किम जोङ ग्वान म्यानेजिङ डाइरेक्टर छन् ।
सन् २०१५ को जुनमा पाठेघरको अप्रेसन गर्ने क्रममा एक महिलाको मृत्यु भएपछि ने कोर्योका कोरियाली चिकित्सक विवादमा परेका थिए । सेफरले भने कोरियाली पद्धतिअनुसार उपचार गर्ने भन्दै बिरामीलाई आकर्षित गर्न पर्चा बाँडिरहेको छ । पर्चामा कोरियाली पद्धति भनिए पनि उत्तर या दक्षिण कुन कोरियाका चिकित्सकले उपचार गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन । त्यहाँ केही समय अघिसम्म तीन जना उत्तर कोरियाली चिकित्सक कार्यरत थिए । तीमध्ये डा. किम सोङको झन्डै एक महिनाअघि हृदयाघातबाट निधन भएको थियो । अस्पताल प्रशासनले कञ्चनपुरमै उनको अन्तिम संस्कार गरेको थियो । सोङको मृत्युपछि सोही हस्पिटलमा कार्यरत उनकी पत्नी जुङ सुन भने उत्तर कोरिया फर्किसकेकी छन् ।
ने कोर्यो अस्पतालको आयव्ययसमेत घाटामा गएको देखिएको छ । बालाजुस्थित करदाता सेवा कार्यालयले ने कोर्योको कर चुक्तापत्रमा घाटाको विवरण देखाएको छ । घाटामा गए पनि उत्तर कोरियालीले अर्को अस्पताल खोल्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट
२०७४,6चैत्र
अमेरिकाले उत्तर कोरिया विरुद्ध व्यापक साइबर आक्रमण गर्दैछ : प्योङयाङ
नेपाल डिभिजन टूको उपविजेता
क्यानडाको ८ विकेट पतन हुँदा नेपाललाई १९५ रनको लक्ष्य
२०१५ पछि पहिलो भेट, कप्तान पारस भन्छन् :– जित्नुको विकल्प छैन